चन्द्र भण्डारीको पहलमा सडक क्षेत्रमा विकासै विकास
२०७० सालपछि के के भयो गुल्मीमा ?
प्रकाशित मिति : २०७४ कार्तिक २५ शनिबार , १८,१६८ पटक हेरिएको
गुल्मीमा । मुलुक चुनावी माहोलमा होमिएसँगै कतै हेवीवेटको चर्चा छ त कतै विकासप्रेमी नेताहरुको चर्चा चलिसकेको छ । कतै नयाँ अनुहारको प्रतिस्पर्धा छ भने कतै पहिले नै सांसद् बनिसकेकाहरु पनि फेरि जनप्रतिनिधि बन्ने दौडमा छन् ।
चन्द्र भण्डारीले के भने केन्द्रीय समितिमा ?
‘कांग्रेसका ७५ वर्ष पुगेकाहरुलाई मिठो खुवाएर विदा गर्न चाहन्छौं’
विकासको इन्जेक्सनले काम नगर्दा पराजय : चन्द्र भण्डारी
तीन करोड नेपालीलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कांग्रेसको लक्ष्य : चन्द्र भण्डारी
सांसद चन्द्र भण्डारीले बोटेहरुका घरमा भित्र्याए दशैं
चन्द्र भण्डारीको प्रश्न- संविधान दिने दललाई भोट दिने कि चुट्किला भन्नेलाई ?
काँग्रेसको घोषणापत्र समितिलाई नेता चन्द्र भण्डारीले दिए यस्तो सुझाव